Chọpụta ihe ị ga-eme n'àgwàetiti Tenerife | Akụkọ Njem
Gaa njem na Tenerife Ọ bụ nnukwu echiche, ọkachasị ebe ọ dị mfe ịchọta onyinye na ụgbọ elu dị ọnụ ala iji gaa ọdụ ụgbọelu ọ bụla nke agwaetiti ahụ. Ma anyị rutere na Tenerife n’ebe ugwu ma ọ bụ n’ebe ndịda, anyị ga-enwe ebe anyị ga-ahụ na ihe anyị ga-eme.
E nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme na Tenerife, karịrị ịnụ ụtọ ọmarịcha osimiri ya. Ọ bụ agwaetiti jupụtara na ebe okike mara mma nke ukwuu, ụzọ ụkwụ na-adọrọ adọrọ na obere obere obodo mara mma, yabụ anyị ga-agagharị n'okporo ụzọ tupu anyị agaa.
1 Gaa na Ogige Ntụrụndụ Teide
2 Zuo ike na Playa de las Americas
3 Lee whale na dolphin na Adeje
4 Iju anya na Los Gigantes
5 Kporie na Loro Parque
6 Nyochaa ọgba nke ifufe
7 Gagharịa n’ugwu Anaga
8 Were njem mmụta site na Barranco de Masca
9 Hụ ebe akụkọ ihe mere eme nke La Laguna
Gaa na Ogige Ntụrụndụ Teide
Otu n'ime nleta agaghị echefu mgbe ị na-aga Tenerife bụ Teide National Park. Ogige a na-enye ala mgbawa ugwu nke yiri ka esi na Mars, tinyekwara ụfọdụ ama ama ama iji were see foto a. Mgbe ị rutere Teide ị ga-akwụ kwụ n'ahịrị iji nwee ike gbaa ụgbọ ala USB. Ọ bụ njem dị mkpirikpi tupu iru n'elu, site na nke a na-enwekarị ọmarịcha echiche. Ọ dị mkpa iweta ihe na-ekpo ọkụ n'ihi na ọ na-abụkarị oyi na ikuku ebe ahụ. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịrị ugwu nke ugwu mgbawa, anyị ga-arịọrịrị ya tupu oge eruo.
Zuo ike na Playa de las Americas
Mpaghara Playa de las Américas dị oke mma touristy ma na;. E nwere ebe azụmahịa nwere ụlọ nri na ụlọ ahịa, yana ụsọ mmiri iji nwee ihu igwe dị mma n'àgwàetiti ahụ.
Lee whale na dolphin na Adeje
Otu n'ime ihe ntụrụndụ kacha mkpa na Costa Adeje bụ dolphin na azụ whale. A pụrụ ịhụ Whales naanị ọnwa ole na ole n'afọ, ma ọ bụ ihe a na-ahụkarị dolphin, ya mere njem ahụ kwesịrị ya mgbe niile. N'ime obodo enwere ọtụtụ ebe ịgbazite ụdị njem a, ọnụahịa ya dịkwa ọnụ ala.
Iju anya na Los Gigantes
N'otu oge ahụ ị nwere ike ịhụ ndị na-anụ ụlọ na Adeje, a ga-eme njem n'okpuru oke ugwu dị ịtụnanya nke Los Gigantes. Nọmalị, ụgbọ mmiri njem gụnyere ịnyịnya na echiche ugwu, nke dị egwu. Ha na-akwụsịkarịkarị n'ọgba mmiri ka ha gaa saa ahụ ma rie nri.
Kporie na Loro Parque
Maka ndị na-achọ anụmanụ ma ọ bụ na-aga dịka ezinụlọ, otu n'ime ntụrụndụ dị n'àgwàetiti ahụ bụ Loro Parque. Ebe a bụ nchịkọta nke osisi nke onwe nke uwa na zoo. Ọ dị na Puerto de la Cruz, n'ebe ugwu nke Tenerife. Gorillas, jaguars na ọbụna dolphins na egbu whales nwere ike ịchọta na zoo.
Nyochaa ọgba nke ifufe
The Cave of the Wind bụ oghere dị n’ime ime ụwa n’ụdị ugwu mgbawa na ntiwapụ nke mere ọtụtụ puku afọ gara aga. Caves nwere obere ngalaba nke enwere ike ileta, mita ole na ole. Na njegharị ndị a na-eduzi, a na-eme ihe omume ndị ọzọ, dịka ịgagharị n'oké ọhịa na ibuga n'ọgba.
Gagharịa n’ugwu Anaga
Mpaghara Anaga bụ a Nchịkwa ihe okike nke Biosphere ọ bụkwa ugwu nwere ugwu n’elu ugwu nke agwaetiti ahụ. N'ebe ugwu a, enwere otutu uzo di iche iche iji bia uzo di n'etiti okike. Dị ka anyị na-ekwu, nke a bụ ihe ọzọ dị ukwuu na-eme n'àgwàetiti ahụ mgbe ịnọ n'ụsọ mmiri, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị na-aga n'oge ọnwa oyi. Zọ nke 'El Bosque Encantado' bụ otu n'ime ihe ndị a rịọrọ ma gaa, mana iji nwee ike ịga ije na ya, ị ga-arịọrịrị maka ikike tupu, ebe ọ bụ na a na-eme obere otu. Ọ dị mkpa ịrịọ maka ikike tupu oge eruo, ọkachasị n'oge dị elu.
Were njem mmụta site na Barranco de Masca
Gbaa ịnyịnya a gafere Barranco de Masca Ọ bụ otu n'ime njem mmụta kachasị ewu ewu. Routezọ ahụ na-abanye na ndagwurugwu ahụ site na ụlọ ọrụ ugbo Masca iji gbadata na mpaghara akụkụ osimiri, ebe ụgbọ mmiri na-echekarị iji bulie ndị na-eme njem ahụ. Ọ na-ewe ihe dị ka awa atọ ma kpuchie ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita ise. Shipgbọ mmiri ahụ laghachiri ndị njem nleta na mpaghara Los Gigantes. Mpaghara a dị nnọọ njem nleta n'ihi nke a, n'ihi ndị na-anụ ụlọ na ugwu Los Gigantes.
Hụ ebe akụkọ ihe mere eme nke La Laguna
Ihe mere eme center San Cristobal de La Laguna UNESCO kwupụtara na ọ bụ World Heritage Site. Nke a bụ isi obodo Tenerife na nke Gran Canaria niile. N'ime etiti akụkọ ihe mere eme, ụlọ ochie ndị echekwara nke ọma, yana agba ha na osisi osisi ha, pụta. Akụkụ a nke nlezianya bụ ihe mere obodo ochie a ji bụrụ ọpụrụiche, obodo nke kwesịrị nleta maka uru ọ bara na akụkọ ntolite, ebe ọ bụ na ọtụtụ narị afọ gara aga, ndị Barista niile nwere ike ịnọ n'ụlọ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Tenerife » Ihe ị ga-eme na Tenerife